PressReader - Lesotho Times: 2016-06-16 - Ntini slams SA cricket
Ntini slams SA cricket
CAPE TOWN — For­mer South African pace­man and Zim­babwe care­taker coach Makhaya Ntini has been crit­i­cal of Cricket South Africa’s re­luc­tance to help neigh­bours Zim­babwe.
Ntini be­lieves the CSA should play a greater role in help­ing out the strug­gling Zim­babwe cricket set up.
In a re­cent in­ter­view with the Sun­day Times, Ntini said: “The first thing I asked when I got here was what is CSA do­ing to help and I picked up that South Africa is not keen on vis­it­ing here and they don’t want much to do with Zim­babwe. It was sad to hear that, along with the fact that I was told they didn’t want to come to Zim­babwe for the tri-se­ries they played with Zim­babwe and Aus­tralia two years ago,”
Ntini has lashed out at South African cricket’s gov­ern­ing body, and queried their mo­tives: “I’d like to find out why they nearly pulled out of that se­ries and also ask why they don’t want to sup­port Zim­babwe, (es­pe­cially since) they are the only other good cricketing na­tion on the con­ti­nent.”
The care­taker coach was South Africa’s first Black player, and now be­comes the first Black South African to coach at in­ter­na­tional level, Ntini doesn’t place any stock in those facts but be­lieves that as a black African he will be able to help Zim­babwe cricket: “We’ve learnt to work hard, share and care as Black peo­ple. That I think is one of the rea­sons why I was ap­proached for this po­si­tion. If you are a car­ing per­son, you are able to work well with peo­ple and this is what Zim­babwe cricket has been need­ing,” Zim­babwe lost their first game un­der Ntini to a young In­dia side on June 11 and will face In­dia in two more ODIS on June 13 and 15 be­fore clash­ing with In­dia in three T20IS.
Zim­babwe care­taker coach makhaya Ntini.